Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy nday : “Aza variana mijery bazary”
Andalan-teny iray zary miverina matetika ao anatin’ilay tonon-kiran’ny Fikambanan’ny Mpianatra Malagasy Fiaviana (Association des Etudiants d’Origine Malagasy = AEOM°) tany amin’ny taona 1974 tany, ao anatin’ilay hira hoe “aza misy miteniteny… sao mitsako tsy misy eo…hifanena amin’ny mpaka kitay” io. Nanana ny lazany izany hira izany, ka ao anatin’izy io no misy hoe “aza variana mijery Bazary…”. Mbola mitombina mandrak’ankehitriny ny vontoatin’io hiran’ny AEOM io, ary miantefa mivantana any amin’ny fitondram-panjakana ny resaka. Maro ny lafin-javatra iankinan’ny aim-bahoaka voaresaka ao anatin’io hira io fa ny anio dia ny tontolon’ny solika no hifotorantsika.
Fantatry ny firenena maro maneran-tany fa manana tahirin-tsolika betsaka isika eto Madagasikara. Hatreto dia tsy mbola voatrandraka izy io. Fotoana anefa izao tokony hiheverana ny firosoana amin’ny fitrandrahana ny solika sy ny etona fandrehitra eto.
Eo amin’ny lafiny fotoana dia mandalo fotoan-tsarotra ny firenena rehetra maneran-tany ankehitriny satria efa any amin’ny 75 Dolara ny barila amin’ny solika eo amin’ny tsena iraisampirenena. Ny dikan’izany, raha izao fahasahiranam-bahoaka eto Madagasikara izao no mbola hotsenain’ny fiakatry ny vidin-tsolika amin’io taona hitsidika io dia tsorina fa “fipoahana ara-tsosialy” na “explosion sociale” no haterany. Tsy ho afaka hitana ny vidin-tsolika amin’ny ankehitriny intsony anefa isika raha tsy mandray fepetra manokana ny fitondrana. Voalohany amin’izany ny fitakiana ny fanavaozana ny fifanarahana amin’ireo orin’asa misahana tetik’asa lehibe momba ny harena ankibon’ny tany (grands projets miniers), dia ny Ambatovy sy ny QMM. Ny fanavaozana ny fifanarahana amin’ireo dia ahazoantsika mahazo vola hoenti-miatrika ny fanalefahana ny vidim-piainana sy ny fananganana fotodrafitrasa. Raha 20 Tapitrisa dolara eo avy no fandoan’Ambatovy sy ny QMm ho ao amin’ny kitapom-panjakana isan-taona, dia tokony ho tafakatra hatrany amin’ny 400 tapitrisa dolara avy any isa-taona ireo raha sahy ka vonona hiaro ny tena tombontsoam-bahoaka ny fitondram-panjakana. Antoka iray hahafahana mitana na manalefaka kokoa ny vaikan’ny vidin-tsolika mitambesatra amin’ny vahoaka io.
Etsy ankilany, ireo solika sy etona fandrehitra an-tapitrisany tapitrisa barila ananantsika dia fotoana hitrandrahana azy izao. Voafetran’ny fotoana koa ny tsy maintsy anombohana sy anaovana izany satria aorian’ny 50 taona any dia tsy hisy hampiasa intsony ny solika. Fotoana izany izao mba hisitrahan’ny Malagasy ny harena nomen-janahary azy. Marina fa tsy ho tratra amin’io taona 2022 io izany fa rariny sy hitsiny ny hanombohana azy. Ny Rafitra “OMNIS” dia efa an-taonany no naneho ny fahavononany hiara—miatrika ny fitrandrahana ny solika eto fa ny fanapahan-kevitry ny fitondrana foibe no antok’io. Izay ilay ambaranay hoe “aza variana mijery bazary”. Raha hirosoana koa anefa ny fitrandrahana dia takiana mba tsy hanara-davahana ny fifanarahana natao tamin’Ambatovy sy ny QMM ka zara raha ny 2%-n’ny vokatry ny solika voatrandraka no mba anjaran’ny vahoaka Malagasy.